काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन यहि मंसिरको दोस्रो सातामा हुने तय भएपछि उम्मेदवारहरुको रस्साकसी शुरु भएको छ । महाधिवेशनको मिति तय भएसंगै पदाधिकारीमा उम्मेदवारीहरु घोषणा हुने क्रम शुरु भएका छन् ।
कांग्रेसमा तेस्रो पुस्ता भनिएका युवा नेताहरुले पनि आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । युवा नेताहरु बनेर परिचय बनाएका कांग्रेसका चर्चित नेता गगनकुमार थापा, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा र केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल एउटै पदमा प्रतिश्पर्धा गर्ने भएका छन् । यी तिनैजना महामन्त्री पदमा प्रतिश्पर्धा गर्ने भएपछि कांग्रेसको युवा सर्कल भित्र उथलपुथल आउने संकेतहरु देखिएका छन् ।
भदौको २४ गते नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले महामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका थिए । सुन्दरीजलस्थित बिपी संग्रहालय पुगेर १४औं महाधिवेशनका लागि उनले महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् ।
बिपी कोइरालाको १०८औं जन्मजयन्तीको अवसरमा उनले महामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । उनी अहिले कांग्रेसका प्रवक्ता हुन । १३ औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य थिए । तर अहिले भने कांग्रेसमा सभापति पछिको शक्तिशाली पद महामन्त्रीमा लड्ने घोषणा गरेका छन् । युवाहरुको नेतृत्वमा कांग्रेसलाई देशकै ठूलो पार्टी बनाउने घोषणा गरे ।
विद्यार्थीबाट राजनीतिमा उदाएका शर्मा नेविसंघको सभापति पनि हुन । २०५७ सालमा नेवि संघका सभापति भएका थिए । शर्माले नेविसंघको राजनीति झापामा स्कुल जिवनबाट गरेका थिए ।
क्याम्पस जिवनमा मेची क्याम्पसको इकाइ अध्यक्ष बनेका थिए । त्यहि क्याम्पसमा स्ववियु सचिवमा चुनाव लडे । तर हारे । झापाकै नेविसघको जिल्ला सभापति पनि बने ।
तर उनलाई नेविसंघको राजनीतिले सधैं साथ दिदै आएको छ । उनी २०४८ सालमा नेविसंघको केन्द्रीय सदस्य भए । २०५२ सालमा धनराज गुरुङ अध्यक्ष हँुदा उनी महामन्त्री भए । महामन्त्री भएको ६ महिनापछि महाधिवेशन हँुदा गोविन्द भट्टराई अध्यक्ष भए भने शर्मा उपाध्यक्ष ।
२०५७ मा उनी नेविसंघको अध्यक्षमा निर्वाचित भए । नेविसंघमा कसैले पनि २ बर्षे कार्यकालमा महाधिवेशन गर्न सकेका छैनन् तर शर्माले दुई बर्षमा नै महाधिवेशन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गरे । उनले महाधिवेशन गरेर गुरु घिमिरेलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरेका थिए ।
नेविसंघको अध्यक्ष भएको १० बर्षपछि उनी गृह जिल्ला झापामा कांग्रेसको जिल्ला सभापतिमा चुनाव लडे तर हारे । सभापति जिते उद्धव थापाले । जिल्लामा नै हारेपछि शर्माको केन्द्रीय सदस्य हुने सपना त्यहि सकियो ।
त्यतिबेला पार्टी सभापति थिए सुशील कोइराला थिए । तर अरु पूर्व नेविसंघका अध्यक्ष मनोनित गरे तर शर्मालाई मनोनित गरेनन् । त्यो समयसम्म शर्मा कोइराला गुटमा नै थिए । तर यो घटनापछि उनले देउवा गुट रोजे ।
२०७२ सालमा देउवा गुटबाट १३औं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा १६२० मत ल्याएर विजयी भए । २५ जना खुल्ला लडेका केन्द्रीय सदस्यमा उनी चौधौं नम्बरमा विजयी भएका थिए ।
जब कि केन्द्रीय सदस्य हुनु भन्दा पहिला नै २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पराजित भएका थिए । २०७४ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पनि पराजय भोगेका हुन ।
निर्वाचनपछि कांग्रेसमा युवाहरुको एक नयाँ समुह उदायो । यसको उद्देश्य थियो पार्टीलाई विधि र पद्धति अनुसार चलाउनुपर्ने र युवाहरुलाई पनि समेटेर लैजानु पर्ने । तर यो युवाहरुको समुह नै आफैमा विभाजित भयो । यो समुहमा विश्वप्रकाश शर्मा, चन्द्र भण्डारी, गुरु घिमिरे, गगन थापा, प्रदीप पौडेल, बद्री पाण्डे, जीवन परियार, धनराज गुरुङ थिए । तर शर्मालाई सभापति शेरबहादुर देउवाला प्रवक्ता बनाएपछि यो ८ जनाको समुह निस्क्रिय नै बन्यो ।
अहिले यी युवाहरु फरक फरक गुटमा सक्रिय छन् । त्यहि मध्येका प्रवक्ता शर्माले महामन्त्रीमा उम्मेदावारी घोषणा गरेका छन् । उनलाई अहिले गुट परिवर्तन गरेको पनि बताइन्छ । तर उनले भने उम्मेदवारी घोषणा गरेका दिन आँफु कांग्रेसको महामन्त्री हुने बताएका थिए । तर कांग्रेसमा नै उनले देउवालाई छोडेका विमेलेन्द्र निधिको गुटबाट महामन्त्री हुने तयारी गरेको बताइन्छ ।
विद्यार्थी राजनीतिबाट चर्चामा आएका हुन गगनकुमार थापा । पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कडा आलोचक थिए थापा । उनले पार्टी नेतृत्वको गलत कुराको खुल्ला रुपमा विरोध गर्न थालेपछि बढी चर्चामा आएको बताइन्छ ।
नेविसंघमा महामन्त्रीसम्म बनेका थिए । अध्यक्ष भने हुन पाएनन् । २०४८ सालमा नेविसंघको काठमाडौं वडा नं. ३३ को सचिवबाट राजनीति सुरु गरेका थिए । २०५१ सालमा नेविसंघको तर्फबाट त्रिचन्द्र कलेजको स्ववियू सदस्यमा निर्वाचित भए । २०५३ सालमा सचिव र २०५५ सालमा स्ववियू सभापतिमा विजयी भए ।
२०५७ सालमा नेविसंघको उपाध्यक्ष र २०५९ सालमा महामन्त्री भए तर उनी अध्यक्ष हुन सकेनन् । २०५९ मा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासन आफ्नो हातमा लिए सात राजनैतिक दलहरुले प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलन सुरु गरे । तर त्यो समयमा राजनीतिक दल भन्दा विद्यार्थी संगठनहरुले गरेको आन्दोलनले गति लिन थाल्यो । उनी पनि आन्दोलनमा अग्रभागमा आउन थाले ।
आन्दोलनको क्रममा मानवअधिकारकर्मी नागरिक अगुवा कृष्ण पहाडी, देवेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा रत्नपार्कमा भएको कार्यक्रममा राजतन्त्र विरुद्ध बोलेको आरोपमा उनलाई पनि पक्राउ गरि राजद्रोहको मुद्दा लगायो । त्यसपछि उनले राजनीतिमा फर्केर हेर्नु परेको छैन । २०६२ चैत २४ गतेदेखि जनआन्दोलन सुरु भयो । उनी पनि वक्ताका रुपमा मंचमा देखिन थाले । त्यसपछि उनी पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुन थाले ।
उनी २०६३ पछि कांग्रेसको काठमाडौं क्षेत्र नं. ४ को क्षेत्रीय सभापतिमा निर्वाचित भए । पहिलो संविधान सभा २०६४ सालमा कांग्रेस सानो दल भयो तर उनी समानुपातिकतर्पmबाट सभासद मनोनित भए ।
२०६७ सालमा सम्पन्न १२औं महाधिवेशनमा सर्वाधिक मत ल्याएर काँग्रेसको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भए । १३औं महाधिवेशनमा युवाबाट उनले महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिए । कृष्णप्रसाद सिटौलाको गुटबाट उम्मेदवारी दिएका थिए तर पराजित भए ।
उनी आफ्नो समकक्षीहरुमा सबै भन्दा पहिला मन्त्री हुनेमा पनि पर्छन । अहिले पनि थापाले महामन्त्रीमा उम्मेदवारीको घोषणा गरेका छन् । तर उनले पनि १३ औं महाधिवेशनको गुट परिवर्तन गरे रामचन्द्र पौडेल र कोइराला गुटमा सहभागी भएका बताइन्छ । जे होस उनले दोस्रो पटक महामन्त्रीको लागि उम्मेदवारी दिने भएका छन् ।
काठमाडौंको अमृत साइन्स क्याम्पसमा २०५३ सालमा नेविसंघको इकाइ अध्यक्ष भएका थिए । त्यसपछि उनी त्यहि क्याम्पसमा स्ववियु सभापतिमा निर्वाचित भए । तर उनी एक्लै सभापतिमा निर्वाचन भएका थिए । नेविसंघको सातौ महाधिवेशन पछि केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित भए ।
विश्वप्रकाश शर्मा अध्यक्ष हुदा २०५७ मा पौडेल सहमहामन्त्रीमा मनोनीत भए । पछि २०५९सालको नवौ महाधिवेशनपछि उनी मनोनीत उपाध्यक्ष भए । नेविसंघका अध्यक्ष थिए गुरु घिमिरे ।
२०६२ सम्म उनी मनोनीत उपाध्यक्ष भए । विभाजित कांग्रेसबीच एकता भएपछि उनी २०६४ मा नेविसंघको अध्यक्षमा निर्वाचित भए । त्यो बेला पौडेलका सहअध्यक्ष अहिले पार्टी सभापतिका दाबेदार कल्याण गुरुङ थिए ।
२०६७ सालको १२ औं महाविधेशनमा पौडेलले पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा पराजित भए । पौडेलले पनि नेविसंघको महाधिवेशन गर्न सकेनन् । पार्टी सभापतिले नै हस्तक्षेप गरेर उनीपछि रञ्जित कर्णलाई तदर्थ समितिको अध्यक्ष बनाए । उनी २०६९ सालमा नेविसंघबाट विदा भए ।
२०७१ मा पार्टी सभापति सुशिल कोइरालाले पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरे । १३ औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भए । २०७४ मा तनहुँबाट प्रदेशसभा सदस्यमा पराजित भए । अहिले उनले सिटौला गुटबाट महामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।
१४औं महाधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसमा महामन्त्रीको लागि तीन जनाले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । तीनै जना नेविसंघबाट राजनीति गरेका हुन् । दुई जना नेविसंघको अध्यक्ष भएका हुन् । एक जना महामन्त्री र उपाध्यक्ष भएका हुन । तीन जनामा कांग्रेसको युवा पुस्तामा पर्छन् । यदि कसैले उम्मेदवारी फिर्ता लिएन भने यी तीन युवा नेताहरुाबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
आइतबार ३, असोज २०७८ १७:४६:०९ मा प्रकाशित